Etu esi atule Man Down System (A10004) | Ngwọta OMG
Taa nchekwa nke ndị ọrụ owuwu bụ nsogbu na-ebili, maka nzukọ ahụ nwere usoro ọdịnala (akwụkwọ ntuziaka) yana usoro ọgbara ọhụrụ (akpaka). Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ụzọ ọdịnala, ha bụ oge na-ewe, ike na-arụ ọrụ na arụ ọrụ adịghị arụ ọrụ. Iji maa atụ, onye ọrụ ghagharịrị ihe niile tupu ya arụ ọrụ. Traditionzọ ọdịnala gụnyere sistemụ mkpu, na-eji sistemụ mkparịta ụka redio, na-enye ngwaọrụ nchebe na usoro ndị ọzọ yiri ha ka ha na-elekwasị anya n'otu ọrụ. N'aka nke ọzọ, ọnụahịa nke usoro ndị a dị elu. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị na-ahụ n'akụkụ nke ọzọ nke mkpụrụ ego ahụ, ihe ngwọta nke oge a maka ndị ọrụ owu na-aghọwanye nke zuru oke na ndị otu na-anakwere ya kwa ụbọchị. Dika onu ogugu enwere ugbua, ahia ihe nlebara anya nke oru nke onye oru gha agha agha agha agha agha agha agha agha agha agha agha agha agha agha agha agha agha agha agha agha agha agha agha agha agha megharia ihe dika Puku Nde GPS ya na ndi oru ego ego. Uru nke ihe ngwọta ndị a dị mfe iji, ọnụ ahịa dị oke ọnụ ma e jiri ya tụnyere usoro ochie ma wepụta otu isi okwu.
Mana ugbua ajụjụ a bilitere ihe kwesiri ịbụ ihe ga - eme ka ihe ịga nke ọma dị mkpa ịchọrọ maka mgbe ị na - ahọrọ ndị ọrụ naanị ya. N'isiokwu a, anyị ga-egosi gị ihe dị mkpa ịga nke ọma ịkwesịrị ịchọ ka ị na-ahọpụta ndị ọrụ naanị ndị ọrụ:
Ihe Nweta Ihe ịga nke ọma tupu ịzụrụ ihe:
Sistem Itinye akpaaka: Ọ bụrụ na anyị hụrụ na njikere ụzọ ochie anaghị enye ozi zuru oke nke na-egosighi ịdị njọ nke ọnọdụ ahụ, yabụ anyị kwesịrị ịhọrọ onye ọrụ ndozi nke na-abụghị naanị na-eziga njikere site na ozi kamakwa ziga ọnọdụ n'ime ozi ma kpọọ oku na onye nlekọta dị mkpa. Okwesiri ịgụnye nwoke n'okpuru sistemụ ma ọ bụrụ na ndị ọrụ gị na-arụ ọrụ n'ebe dị elu.
Wevable na ịnwetanwu: Akụkụ bụ isi na - ekere òkè na ọganiihu nke onye ọrụ naanị ya bụ mgbe iwe were onye ọrụ iwe iwe mgbe ọ na - arụ ọrụ ya. Yabụ, ọ bụrụ na ngwaọrụ dị mma iyi ya, enwere ohere karịa na onye ọrụ ga-eji ya. Ibility nweta nnweta bu kwa ihe di nkpa. Mgbe onye ọrụ nọ n'ọnọdụ dị njọ, ha nwere obere oge imeghachi omume yabụ na ọ ga-adabacha na nkebi nke abụọ.
customization: Industrylọ ọrụ ọ bụla nwere ihe ọghọm ya nwere njikọta na ndị ọrụ naanị ya. Ya mere, chọọ ihe ngwọta ndị ị nwere ike gbanwee dịka azụmahịa gị si dị. Dịka ịchọrọ nkwụmọdọ nke ga - eziga otu mkpu ma ọ bụ nke gị, ma ọ bụ nwee ike ịtọ otu ebe ma ọ bụrụ na mmadụ esi ebe ahụ pụọ, a ga-ezitere gị ozi. Yabụ, chọọ ihe ngwọta nke enwere ike ịhazi ya dịka mkpa gị ma nwee ike ịnye ndị na-arụ ọrụ naanị gị nchekwa zuru oke.
Njikwa njikwa: Shouldtù kwesiri ichota uzo obula nke n’eme ka ha hazie njiri mara nke ihe ngwọta a. Ọmụmaatụ, ngwaọrụ ndozi ọrụ onye ọrụ kwesịrị inwe ngwa ekwentị nke na-enye dị ka ọnọdụ nke onye ọrụ naanị ya, n'otu aka ahụ, nzukọ nwere ike ịhụ ebe ndị ọrụ naanị ha na-arụ ọrụ n'oge gara aga. Site na inye ikike zuru oke ha nwere ike hụ na nchekwa nke ndị ọrụ naanị ya.
Sistemu Ejikọtara: Gbalịa ịzụta ihe ngwọta ndị ahụ nke enwere ike ijikọ na sistemụ ugbu a ma ọ bụ nke ga-enyere gị aka itinye aka na ngwọta ị ga-azụta n'ọdịnihu. Site na ijikọta ngwaọrụ niile, ị nwere ike ịmepụta sistemụ na-egosipụta ihe ga-enyere nzukọ gị aka belata ihe ndị metụtara ndị ọrụ naanị ya.
Ihe Ziri Ezi Ihe Omuma Nke Zuru Uwa:
Mepụta amụma: Zụlite iwu doro anya gbasara ndị ọrụ naanị ya ma soro ndị ọrụ owu na-ekwurịta okwu. Ọ ga-agụnye ntuziaka doro anya banyere ọrụ ọ bụla onye ọrụ owu na-arụ ma mesie ya ike na iji usoro nchekwa.
Ọzụzụ: ihe ndozi nchekwa nke ndị ọrụ na-abịa ọtụtụ atụmatụ ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ka nzukọ zụọ ndị ọrụ maka otu ha ga-esi jiri atụmatụ ndị a rụọ ọrụ nke ọma. N'otu aka ahụ, n'oge nzukọ ọzụzụ kwesịrị ịgbalị imebi ihe mgbochi ọ bụla nke onye ọrụ na-enwe iji ojiji ndị a.
Karọt na mkpisi obibia: nzukọ a kwesịrị inye ndị na-agbaso iwu nchekwa ahụ anya ma na-eji usoro onye ọrụ ya nke ọma. N’aka nke ọzọ, ntaramahụhụ kwesịrị ịdịrị ndị na-emegide iwu a.
Lee anya na: Nzukọ a kwesịrị ileghachi anya azụ site n'oge ruo n'oge ma hụ arụmọrụ ya mgbe mmejupụta nke ndị ọrụ nsogbu naanị. Ọ bụrụ na agbanwe agbanwe ewetara nsonaazụ dị ịtụnanya karịa ịnwa ijide ya. Agbanyeghị, ọ bụrụ na nsonaazụ ahụ anaghị agba ume ịkwesịrị ịmalite site na ebe mbụ e kwuru okwu n'isiokwu ahụ wee nwaa ịchọpụta nsogbu ahụ.
Na mmechi, anyị na-atụ aro maka mantra maka ọganiihu nke onye ọrụ naanị ya na-adabere n'ihe abụọ. Nke mbu, na nzuta tupu gi azuta ihe ichoro bu ihe diri gi nma. Nke abuo, na mgbe azụtara ihe, ịkwesịrị ịzụlite ụkpụrụ dị irè, zụọ ndị ọrụ ma jiri ụzọ karọt na mkpisi wee nweta nsonaazụ. Yabụ, ndị a bụ ihe ga - eme ka ihe ịga nke ọma dịrị onye ọ bụla.
Nzuzo 2817 12 Echiche Taa